I-DSI/NRF Centre of Excellence in Indigenous Knowledge Systems (i-CIKS) igubhe i-World Mental Health Day ekhempasini i-Westville ngomcimbi obuhlose ukwazisa ngokunqanda ukuzibulala. Kulo mcimbi bekukhona ongoti bezengqondo, abelaphi bendabuko, abasebenzi basenyuvesi kanye nomphakathi.
Inkulumo kaNks Londiwe Cele wase-UKZN, esihloko sithi Ubuntu and Mental Healthcare: The Power of Social Integration, ibigxile ezinsikeni zobuntu njengokuphokophela, ukwesekana kwabantu nobunye, ukunakekela, inhlonipho nokuhlonipheka. ‘Emphakathini onobuntu, umuntu ogula ngengqondo uyemukelwa, angakhishwa inyumbazana emndenini nasemphakathini ngokucula, ngokusebenza, ngokusina, ngezinganekwane, ngokugubha, ngemisebenzi yomsamo nangokuphila emphakathini,’ kusho uCele.
‘Inkulumo phakathi kwezikhulumi ibalule ubumqoka bokuba wumphakathi uma kubhekenwe nezinto ezithinta ukugula ngengqondo. Imigomo yokuphokophela, ukwesekana (ukuzwelana), ukunakekela, inhlonipho nokuhlonipheka ebuntwini kuthiwe yiyo eyisisekelo sokubuyisa ubuntu nokunciphisa amathuba okuzibulala kwabantu ezindaweni ezisemakhaya nezisemadolobheni.’
Umelaphi wendabuko uDkt Zabalazile (Makhosi) Makhoba uthe kumqoka ukuthola umnyombo wokugula ngengqondo uma kwelashwa ukugula ngengqondo. ‘Esikhathini esiningi uthola ukuthi imbangela ngeyesimo somoya,’ kusho uMakhoba. ‘Ukuphazamiseka ngengqondo kungaba ngenxa yokulahleka nokusebenzisa isibongo okungesona esakini.’
UMakhoba ubale ukuhlukumezeka, ukhwantalala nexhala, umzwangedwa nokusebenzisa izidakamizwa njengezinye zezizathu zokugula ngengqondo. Ongoti ezindleleni zesiNtu bathe ukugula ngengqondo kwakuthathwa njengenkinga yempilo ngokwenhlalo yabantu bomdabu.
Imenenja yoCwaningo yase-CIKS uDkt Mayashree Chinsamy iveze ukuthi isiKhungo sibona ubumqoka bokuthatha izinto ngeso lesiNtu ngokubambisana nongoti ezindleleni zokwenza izinto ngeso labantu, yingakho sekusungulwe isigcawu socwaningo ngezindlela zokwenza izinto ngeso lesiNtu mayelana nokugula ngengqondo.
Izingxoxo nemibukiso efana nalo mcimbi beyiyingxenye yohlelo lokuphucula ulwazi nokunqonda izindlela zokubuka izinto ngeso labantu nezindlela zokwenza izinto ezihambisana nesimo sengqondo ngokwesiko nangokwemvelo emiphakathini ethile. Lesi sithangami sokuthekela nokucobelelana ngolwazi bekungesokuqinisa amaxhama okuxhumana phakathi kwabelaphi besilungu nabomdabu ngokufundisana nangokuphucula isimo sezempilo kulo mkhakha.
Lo mbukiso ukhangise ngezinto eziningi ezithinta izihloko zocwaningo ngesimo sempilo yengqondo, izithangami zokucobelelana ngolwazi ezingeni lomhlaba, izinhlangano zosizo, ukushaya imithetho ngezempilo zengqondo namabhuku ocwaningo.
Umfundi oqeqeshelwa umsebenzi eMnyangweni we-Occupational Therapy uNks Nokwanda Khanyile ubalule ihlazo ngaloku kugula nokungazi ngakho, wathi: ‘Liningi ihlazo elihambisana nokugula ngengqondo kubantu abamnyama, nangazo zonke izinhlobo zokhwantalala kanti ukhwantalala yinto abantu abaningi abangakayazi.’
UMnu Simphiwe Simamane wakwaMasipala waseThekwini ulandise ngophathwa wukhwantalala kwakhe, wagcizelela ubumqoka bokuthi uma ubhekene nesimo esinje kumele kube khona umuntu oxoxa naye nokubheka zonke izimpawu zokhwantalala njengobuhlungu bentamo, intukuthelo, ukulahlekelwa yithemba nokuqwasha. ‘Ziphilele, wenze umehluko uma ungakwazi, uhlale unobuntu,’ kusho yena.
UNks Lori Barausse wase-UKZN wasungula inhlangano elwa nokunqanda ukuzibulala i-Survivors of Loved Ones of Suicide (i-SOLOS), ngemva kokushonelwa wumuntu amthandayo owazibulala eminyakeni eyishumi edlule. ‘Ukucwaswa okuhambisana nokugula ngengqondo kusekuningi kuleli zwe nasemhlabeni jikelele,’ kusho uBarausse. ‘Kuseyisifo esidelelekile njengoba ezinye izifo ezinjengomdlavuza noshukela zithathwa ngendlela ehlukile kunangendlela ukugula ngengqondo okuthathwa ngayo ngenxa yokuthi ukuphathwa wukhwantalala akubonakali emehlweni.’
Uthe kumqoka kakhulu ukuxhumana, wakhuthaza bonke abantu ukuthi baqikelele izimpawu zokufuna ukuzibulala. ‘Ukuzibulala kuyagwemeka ngokuphelele. Akube khona okhuluma naye noma omsizayo,’ kusho yena. Ungavakashela ku: http://www.survivorsofsuicide.co.za/ noma ku: http://www.sadag.org/ ukuthola eminye imininingwane.
Izithunywa zivumelene ngokufakwa kwemigomo yobuntu emfundweni kusukela emazingeni aphansi ukuze ibe yizindlela ezamukelekile zokunqanda ukuzibulala.
Lo mcimbi uvale ngokuthi izethameli zicobelelana ‘ngemiyalezo ezigoduke nayo’ okukhona kuyo lokhu: (1) ubambiswano nobunye phakathi kwabelaphi besilungu nabomdabu kuyo yonke imikhakha, (2) ukuhloniphana okungenzeka ngokuqhakanjiswa kwamasiko esintu ukuvala igebe elikhona phakathi kwabantu abadala nentsha, (3) izindlela zolwazi ezihambisanayo eziqhakambisa inhlonipho nokuhlonipheka kwemibono engafani kanye nokwazi ngezindlela ezingefana zokweseka labo abanaloku kugula.
Amagama: u-Raylene Captain-Hasthibeer